Home News Khayre oo kala diray Gudiga Xalinta Khilaafaadka Galmudug&Amar culus oo labixiyay
Xasan Cali Kheyre R/Wasaasaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo weli ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa kala diray dhamaan guddiga xalinta Khilaafaadka ee Maamulka Galmudug.
Arrintan ka dambeysay kadib markii xal laga gaaray tabashooyinka ay qabaan dhamaan beelaha dega deegaanada Galmudug.
R/Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa uu amar ku bixiyay in guddiga doorashooyinka Galmudug ay ku dhawaaqaan Liiska 69 Mudane oo ka mid ah baarlamaanka maamulka Galmudug.
Guddiga doorashooyinka Galmudug ayaa horay ugu fashilmay dhowr Jadwal doorasho oo ay soo saareen, waxaana Magaalada Dhuusamareeb maalmihii dambe kulamo ka wado Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Dhinaca kale Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa xalay Guddi Cusub u magacaabay Doorashada Galmuug, waxaana magacaabista uu sameeyay cirka sii galisay Khilaafka hor leh oo ka dhashay Doorashada Galmudug.